REGSVR32.EXE IBU IHE NHAZI - IHE Ị GA-EME - WINDOWS - 2019
Regsvr32.exe ibu ihe nhazi - ihe ị ga-eme
Otu n'ime ọnọdụ ndị na-adịghị mma onye ọrụ Windows 10, 8 ma ọ bụ Windows 7 nwere ike izute bụ Microsoft regsvr32.exe ndebanye aha nkesa nke na-ebu ihe nhazi ahụ, nke egosiri na njikwa ọrụ. Ọ naghị adị mfe mgbe niile ịchọpụta kpọmkwem ihe kpatara nsogbu ahụ.
Na ntuziaka a, n'ụzọ zuru ezu banyere ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na regsvr32 na-ebute nnukwu ọrụ na usoro ahụ, otu esi achọpụta ihe kpatara nke a na otu esi edozi nsogbu ahụ.
Kedu ihe nkesa aha Microsoft maka?
The regsvr32.exe ndebanye aha nkesa bụ usoro usoro Windows nke na-edebanye aha ụfọdụ ụlọ akwụkwọ DLL (usoro ihe omume) na usoro ma hichapụ ha.
Usoro usoro ihe a nwere ike ịgba ọsọ ọ bụghị nanị sistemụ arụmọrụ n'onwe ya (dịka ọmụmaatụ, n'oge mmelite), kamakwa usoro mmemme nke atọ na installers ha, nke dị mkpa iji wụnye ụlọ akwụkwọ ha ka ha rụọ ọrụ.
I nweghị ike ihichapụ regsvr32.exe (dịka nke a bụ mpaghara Windows dị mkpa), mana ị nwere ike ịchọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ na usoro ma dozie ya.
Olee otú idozi a elu CPU ibu regsvr32.exe
Rịba ama: tupu ịmalite usoro ndị dị n'okpuru, gbalịa ịmalitegharịa kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ. Na maka Windows 10 na Windows 8, buru n'uche na ọ chọrọ nyochaghachi, ọ bụghị imechi ma gbanwee (ebe ọ bụ na usoro ikpeazụ ahụ, usoro ahụ anaghị amalite ịcha). Ikekwe nke a ga-ezu iji dozie nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ na njikwa ọrụ na regsvr32.exe na-ebu ihe nhazi ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ mgbe ụfọdụ ka ụfọdụ usoro ihe omume ma ọ bụ Os nke a na-akpọ nchịkwa ndebanye aha maka ụfọdụ DLL, ma a gaghị egbu ihe a ("eyịride" a) n'ihi otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ.
Onye ọrụ ahụ nwere ohere ịchọta: usoro a mere ihe nkesa ndebanye aha na nke ọrụ ndekọ ụlọ na-eduga nsogbu ahụ ma jiri ozi a dozie ọnọdụ ahụ.
Ekwadoro m usoro ndị a:
Download Explorer nhazi (dabara maka Windows 7, 8 na Windows 10, 32-bit na 64-bit) site na Microsoft - //technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/processexplorer.aspx ma na-eme ihe omume ahụ.
Na ndepụta usoro usoro na Process Explorer, chọpụta usoro na-ebute ibu na nhazi ahụ ma gbasaa ya - n'ime, ị ga-ahụkarị usoro "nwa" regsvr32.exe. N'ihi ya, anyị natara ozi nke mmemme (nke nke regsvr32.exe na-agba ọsọ) a na-akpọ nchịkwa ndebanye aha.
Ọ bụrụ na ị na-ekpuchi ma jidekwa òké ahụ n'elu regsvr32.exe, ị ga-ahụ akara "Iwu iwu:" na iwu ahụ e zigara n'usoro (enweghị m iwu dị otú ahụ na nseta ihuenyo, mana ị ga-ele anya dị ka regsvr32.exe na iwu na aha ụlọ akwụkwọ DLL) nke a ga-akọwapụta ọbá akwụkwọ ahụ, bụ nke a na-anwa ime omume, na-ebute nnukwu ọrụ na nhazi ahụ.
Jiri ihe ọmụma ị nwere ike ime ụfọdụ omume iji dozie nnukwu ọrụ na nhazi ahụ.
Ndị a nwere ike ịbụ nhọrọ ndị a.
Ọ bụrụ na ị maara usoro ihe mere maka nchịkwa ndebanye, ị nwere ike ịnwa imechi mmemme a (wepụ ọrụ ahụ) ma gbanwee ya ọzọ. Ntinye nke mmemme a nwekwara ike ịrụ ọrụ.
Ọ bụrụ na nke a bụ ụdị installer, karịsịa na-enweghị ikikere ikikere, ị nwere ike ịnwa iwepụ antivirus na nwa oge (ọ nwere ike igbochi ndebanye aha DLLs gbanwere na usoro).
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ pụtara mgbe emelite Windows 10, usoro ihe omume ahụ na-eme regsvr32.exe bụ ụfọdụ ụdị nchedo (antivirus, nyocha, firewall), gbalịa wepu ya, malitegharịa kọmputa ma wụnye ọzọ.
Ọ bụrụ na ị maghị ihe usoro a bụ, mee nchọnchọ na Ịntanetị site na aha DLL nke a na-arụ ọrụ ma chọpụta ihe ọbá akwụkwọ a bụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nke a bụ ụdị ọkwọ ụgbọala, ị nwere ike ịnwa iji aka wepụ ma wụnye ọkwọ ụgbọala a, na-emecha usoro regsvr32.exe.
Mgbe ụfọdụ, ọ na - enyere aka rụọ batrị Windows na ọnọdụ dị mma ma ọ bụ batrị dị ọcha Windows (ọ bụrụ na mmemme nke atọ na - egbochi nchịkọta ndebanye). N'okwu a, mgbe ibu dị otú ahụ, chere naanị minit ole na ole, jide n'aka na ọ dịghị ibu dị arọ na nhazi ahụ ma malitegharịa kọmputa na ọnọdụ nkịtị.
N'ikpeazụ, ana m achọpụta na regsvr32.exe na njikwa ọrụ na-abụkarị usoro usoro, ma na tiori o nwere ike pụta na ụfọdụ nje na-agba n'okpuru otu aha ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere enyo dị otú ahụ (dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ nke faịlụ ahụ dị iche na ọkọlọtọ C: Windows System32 ), ị nwere ike iji CrowdInspect nyochaa usoro ọsọ maka nje.